युट्युबर सोनिका रोकायाले सुरु गरिन् नयाँ व्यवसाय…… – Voice Samachar
२१ दिन लाग्यो डाक्टर भोला रिजाल दम्पत्तीले कारोनालाई जित्न
मुख्य पृष्ठ /News/युट्युबर सोनिका रोकायाले सुरु गरिन् नयाँ व्यवसाय……
युट्युबर सोनिका रोकायाले सुरु गरिन् नयाँ व्यवसाय……
काठमाडौं २५ फागुन / बेला बेला चर्चामा आइरहन रुचाउने मोडल तथा युट्युबर सोनिका रोकायाले राजधानी फेरि अर्को नयाँ व्यवसाय सुरु गरेकी छिन् । सोनिका रोकायले फोनिक्स पार्लर खोलेकी छिन । सिनामंगल स्थित पुरानो ताराहल चोकमा आज एक कार्यक्रम गरी संचालनमा ल्याएकी हुन ।
आजभोली तातो बहसको विषय बनेको छ विवादीत युट्युवर सोनिका रोकाया र पूर्वयुवराज पारस शाहको सम्बन्ध । यी दुवैको निकटताबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन् । जसको छेस्को निर्मलनिवाससम्म पनि विझिसकेका विवरणमा आउन थालेका छन् ।
यहि सम्बन्धका विषयमा सोनिकाले विभिन्न मिडियामा स्पष्टीकरण दिने कोशीश गरेका छन् । तर, पत्याउने कसले ? अझ तिव्र चर्चा र आलोचना भएपछि सोनिका आफैंले पारससँग केहि महिना पहिले फेवातालमाथि डुङ्गामा एउटा भिडियो बनाएर सोधेकी छन्– हाम्रो सम्बन्धका विषयमा भएका चर्चाबारे के भन्नुहुन्छ ?
उत्तरमा पारसले भनेका छन्– भगवान जाने । उनले आफ्ना पछि ३० बर्षदेखि मिडिया लागेको उल्लेख गर्दै नीजि जीवन बिताइरहेको बताएका थिए । यति मात्र होइन, सुशासनसम्बन्धी कुरा निकाल्दै पारसले आफ्ना पछि भन्दा पनि कस कसले घुस खान्छ त्यसका पछि लाग्नुपर्ने समेत बताएका थिए ।
पूर्व राजकुमार पारस शाह र युट्युवर सोनीका रोकाया बीचको सम्बन्धलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै गसिप भइरहेका छन् । सोनिकाले पारसलाई लिएर कार्यक्रम नै बनाउने र पारस जहाँ गयो त्यहाँ सोनिकालाई पनि देखिन थालेपछि गसिप बन्न थालेको हो । साथै उनीहरुको केही ब्यवहारले पनि गसिपलाई मलजल दिएको छ ।
जब पारस शाह सोनीकाको क्लबको उदघाटनमा पुगे, यी दुई बिचको गसिप बन्न थाल्यो र जब पारसले सोनीकालाई लिएर मनाङ्ग सम्म घुम्न पुगे, धेरैले आ(आफ्नो तरिकाको अनुमान लाउन थाले ।
पारस शाहको पैसाको लागि सोनीका पछि लागेकी देखि सोनीकाले गर्दा पारस शाहले श्रीमती हिमानी शाहसंग डिभोर्स सम्म गर्ने हल्ला समेत सामाजिक संजालमा चल्न थाले । अहिले सामाजिक संजालमा पारस शाह र सोनीकाको लभ अफेयर चलिरहेको छ भन्ने गसिप चलिरहेको छ । यहि विषयमा पारसले भनेका पनि थिए कि हाम्रो सम्बन्ध भगवान जाने ।
यसै क्रममा केहि दिन अगाडी पूर्व युवराज पारस साहले भिजे तथा मोडल सोनिका रोकायालाई हिराको हार उपहार दिएपछि फेरी सामाजिक संजाल तातियो । केहि दिन अगाडी २५ वर्ष लागेकी रोकायाको जन्मदिनको अवसरका साहले हिराको हार उपहार दिएपछि झनै सामाजिक संजालमा उनीहरुको चर्चा बढ्न थाल्यो ।
यसै क्रममा आज युटुबर सोनिका रोकायले नयाँ ब्यवसाय फोनिक्स पार्लर खोलेकी छिन । सिनामंगल स्थित पुरानो ताराहल चोकमा आज एक कार्यक्रम गरी संचालनमा ल्याएकी हुन । बिगत लामोसमय देखी सोनिका सँग जोडिएका पुर्व युवराज पारस पनि सो उद्घाटन कार्यक्रममा आएका थिए । पारस आफु अश्वासथताको बावजुत पनि उनले फुलका बुकी बोकेर बधाई दिएका थिए । पारसले त्याहाँ आएपछी कालो चिया लिँदै सोनिका सँग ठट्टा पनि गरे ।
बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरी ‘ठूलो’ रकम चोरी गर्न खोज्ने तीन जना पक्राउ
ललितपुर महानगरको चक्रपथ क्षेत्रभित्र आज राति १० बजेसम्म कर्फ्यू
५० डिग्रीमा श्रीमानले कमाएको पैसा सहित साना बाबू नानी लाई एक्लै छोडेर यो केटा शीत फरार
गाईवस्तुमा पनि देखियो नयाँ भाइरस